Barataa Technologies – Giddu Gala barnootaa fi Odeeffannoo
IDM gargaaramuudhaan akkaataa faayila torrent irraa buusuun danda’amu
By Alifu Haji	Technology July 16, 2019
Maxxansa yeroo darbee keessatti akkaataa faayiloota torrent irraa buufachuun danda’amu irratti barreesseen ture. Gaafa faayiloota torrentt buufannu saffisa nuti barbaannuun buufachuu dhabuu dandeenya. Keessattuu namoonni qunnamtii intarneetii saffisaan xiqqaa tahe fayyadamna yoo tahe. sababa kanaaf yeroo tokko tokko faayiloonni osoo bu’anii hin dhumatin addaan cituu danda’u. Jalqaba irratti gara marsariitii https://zbigz.com/ tanaa deemi. Marsariitiicha irratti galmaayi. Erga galmooftee booda email kee mirkaneessuudhaan/verify/…
Maxxansa kana keessatti akkaataa Bootstrap gara codeigniter dabaluudhaan itti fayyadamuu yookiin gargaaramuu dandeenyu wajjiin ilaalla. Codeigniter hin beektan yoo tahe, codeigniter’n fireemwoorkii php kan marsariitilee gara garaa hojjachuuf nu tajaajiluudha. Marsariitilee gara garaa hojjachuuf yoo barbaaddu yoo tahe, osoo codeigniter fayyadamtanii isiniin jedha. sababni isaa codeigniter adeemsota walxaxoo heddu salphisee jira waan taheef. Isatti fayyadamuuf dura CodeIgniter gara marsariitii isaanii deemuudhaan buufachuu…
Maashinni soba adda baasu akkamitti hojjata?
By Alifu Haji	Technology June 22, 2019
Namni hin kijibnee jiraa? Deebii isinumaaf dhiisa. Bultiin namoota hedduu, lubbuun namaa fi wantoota gara garaa sababa kijibaan manca’ee yookiin diigamee jira. Sobni yookiin kijibni sadarkaan isaa miidhaa yookiin balaa geeggeessuun wal haa caaluu malee sobni sobuma. Kana yoo jennu immoo kijibni yookiin sobni marti miidhaa geessisu jechuu miti. Kanneen faaydaa qabus jiru. fakkeenyaaf namoota gara garaa lama wal dhabanii jiran walitti…
Libra – Maallaqa dijitaalaa Facebook haarawa
By Alifu Haji	Technology June 21, 2019
Mootii miidiyaa hawaasaa kan tahe, facebookiin bara 2020ti gosa maallaqa dijitaalaa haaraa Libra jedhamu hojjachuuf deema. Akka jedhamutti namoonni salphumatti karaa WhatsApp, facebook fi app Libraatiin maallaqa waliif daddabarsuu danda’u. Garuu immoo yaaddoo guddaa tahee kan jiru, nageenya maallaqa itti fayyadamtootaati. Sababni isaa rakkoon facebookiin gama nageenya itti fayyadamtoota isaa eeguuf yookiin too’achuuf qabuu dha. Facebookiin garuu akka jedhutti Libran kan too’atu…
By Alifu Haji	Technology June 20, 2019
Gargaarsa app dabalataa yookiin app faayiloota dhoksuuf tajaajilan osoo hin gargaaramin faayiloota moobaayila keenya irratti argaman kanneen akka suuraa, viidiyoo, dookimeentiiwwan gara garaa namni biraa akka hin agarretti dhoksuu yoo barbaanne tartiibota armaan gadii kanneen hordifuu qabna.